Ithegi: 2015 | Martech Zone
I-Kenshoo ehlawulelwayo yokuThengisa ngeDijithali: Q4 2015
NgoLwesithathu, ngoFebruwari 17, 2016 NgoLwesibini, Februwari 16, 2016 Douglas Karr
Unyaka nonyaka ndiyakholelwa ukuba izinto ziya kuqala ukulinganisa, kodwa unyaka nonyaka iimakethi zitshintsha kakhulu- kwaye i-2015 ayifani. Ukukhula kweselfowuni, ukunyuka kweentengiso zoluhlu lweemveliso, ukuvela kweentlobo zentengiso ezintsha zonke zinegalelo kutshintsho oluthile kwindlela yokuziphatha kwabathengi kunye nenkcitho enxulumene nabathengisi. Le infographic intsha evela eKenshoo ityhila ukuba intlalo ikhule kakhulu kwindawo yentengiso. Abathengisi bonyusa inkcitho yabo kwezentlalo ngama-50%
Ukwabelana ngeempumelelo zethu kunye nokusilela kwethu kowama-2015!
NgoMgqibelo, uJanuwari 2, 2016 NgeCawa, nge-3 kaJanuwari 2016 Douglas Karr
Wow, ngowuphi unyaka! Abantu abaninzi banokujonga kwizibalo zethu kwaye baphendule nge-meh… kodwa khange sonwabe ngakumbi ngenkqubela phambili eyenziwe sisiza kunyaka ophelileyo. Ukuyila kwakhona, ukwanda kwengqwalaselo kumgangatho kwizithuba, ixesha elichithwe kuphando, konke kuhlawula kakhulu. Sikwenze konke ngaphandle kokunyusa uhlahlo-lwabiwo mali kwaye ngaphandle kokuthenga nasiphi na isithuthi ... konke oku kukukhula kwendalo! Ukukhupha iiseshoni ezivela kwimithombo yogaxekile yokuhambisa, nantsi
Iminyaka emithandathu eyadlulayo, owona mceli mngeni mkhulu kwintengiso ekwi-Intanethi yayikukudibanisa, ukulungelelanisa, kunye nokulawula umyalezo kwisitishi ngasinye. Njengoko iindlela ezintsha zavela kwaye zanda ekuthandeni, abathengisi bongeze iibhetshi ezininzi kunye nokuqhushumba ngakumbi kwishedyuli yabo yemveliso. Isiphumo (esasele siqhelekile), yayiyimfumba enkulu yezentengiso kunye nemiyalezo yokuthengisa eyayihlisa yonke into emqaleni. Ukubuyela umva kuyaqhubeka -kukucaphukisa abathengi ukungabhalisi kunye nokufihla kwiinkampani abazenzayo